Ny code de la route, izay Lalàna izany Code izany, toy ny Code électoral, no anisan'ny Lalàna ampiasain'ny maro indrindra, nefa io no betsaka manitsakitsaka. Firy amin'ny mpamily no manome làlana ny mpandeha tongotra rehefa hiampita izy? Firy amin'ny mpandeha tongotra no miampita amin'ny toerana voafaritra amin'izany? Misy ve ny trotoire andehanan'ny mpandeha an-tongatra sa lasa toeram-pivarotana sy lasa parking? Tsy misy panneau de signalisation sy marquage au sol, fanajana limitation de vitesse;
- Famonjena afo, firy ireo Kaominina manana mpamonjy voina, misy tanàna ve manana bouche d'incendie na ireny paopin-drano lehibe famonoana afo ireny;
- Sécurité sociale, na ny fiantohana ny fitsaboana ny rehetra, sy ny famonjena ireo sahirana sy tsy ampy sakafo;
- Sécurité infentile, fiarovana ireo zaza;
- Sécurité ho an'ireo olona manana kilema, firy ireo fiantsonana bus mametraka amin'ny toerany ireny manana kilema ireny, firy ny birao azo idiran'izy ireny, ka tsy hiakatra tohatra, na varavarana tsy mifandraika amin'ny kilemany, ny WC tsy ara-dalàna ny fahazoany mampiasa azy.
- Ahoana ireo voafonja miriorio manao ny ataony, ny toerana hitazomana azy ireny feno sy ratsy;
- Sécurité de travail, na ny fahamarinan-toeran'ny asa, fandroahana mpiasa tsy amin'ny antony, fanararaotan'ny patron amin'ny filana ara-nofo, ny fiarovana eo amin'ny asa atao, casque de chantier, chaussure de travail;
- Sécurité cyclone, tondra-drano;
- Sécurité épidémie, na valanan'aretina toa ny pesta, gripa, SIDA;
- Sécurité frontière - douanière, ny fiambenana ny sisin-tany sy fiarovana ny harem-pirenena;
- Sécurité environnementale, fiarovana ny tontolo iainana, ny ala, ny fahadiovan'ny rano, ny fahadiovan'ny rivotra na pollution de l'air, ireny setroka avoakan'ny fiarakodia izay miteraka omamiadana cancer sy mamparary tratra ireny, ny fijerena ireny fako any an-trano sy ny dechet industriel izay manapoizina ny tany, ny rano ary ny tontolo iainana;
- Rongony, ny zava-mahadomelina sy ny toaka, ny bar, ny vidéo sy film mahamoa fady rehetra, izay mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana;
- Sécurité Nationale, fiarovana ny fiandrihanam-pirenena sy ny Andrim-panjakana rehetra ary ny mety fanafihan'ny Firenena hafa avy any ivelany.
Hitatsika amin'izany fa midadasika ity resaka Fandriam-pahalemana ity.
Raha fintinina izany dia ahoana no ametrahana fiaraha-monina lavitry ny tebiteby sy fitaintainana, na arak'asa, na ara-piaramonina, na ara-tsakafo, na ara-pifamoivoizana, satria na hiampita arabe aza ianao dia mitaintaina sy tsy "en sécurité" satria mety hisy fiara andona anao, tonga any an-trano matahotra sao nisy mpamaky trano, eny an-dalana sao hisy anendaka fa maizina ny làlana, ny elakelan-trano tsy ara-dalàna fa feno rano.
Avaozina tanteraka ny asa sy rafitry ny Fitandroana filaminana sy ny Foloalindahy.
Ahompana tanteraka amin'izany asa fiarovana izany, na an-tanety, na an-dranomasina na an'abakabaka.
- Avaozina tanteraka ny lakazerina sy ny trano fonenan'ny Tafika;
- Vatsiana fitaovana moderina sy ari-fomba toy ireny gilet par balle ireny;
- Avaozina tanteraka ny fitaovam-piadiana;
- Vatsiana fiaramanidina aingam-pandeha 6 (2 isaky ny Faritra, Avaratra, Afovoany, Atsimo) sy helicoptère;
- Vatsiana sambo mpiady sy vedety isaky ny fari-dranomasina
- Asiana prefet de la mer, 6 (2 isaky ny Faritra, Avaratra, Afovoany, Atsimo, ka ny iray hiandraikitra ny ilany andrefana, ny iray hisahana ny ranomasina atsinanana ao amin'ny Faritra misy azy);
- Asiana prefet ihany koa hiandraikitra ny Canal des Pangalanes, izay hisahana ny fandriam-pahalemana amin'ilay lakandrano lehibe hampitohy ny ilany atsinanana avy any Cap Masoala Antsiranana ary hiafara any Androy, Cap Sainte Marie, izy ihany koa no hisahana ny fandriam-pahalemana amin'iny lalamby masinina sy autoroute ilany atsinanana iny.
Tsy hisy indrafo ny ady atao amin'ny kolikoly, ny asan-dahalo, ny halatromby, ny halatra harem-pirenena, ny halabotry, ny kidnapping, ny halatra volamena, vanille sy bois de rose, ny fampihorohoroana ny mpamboly sy mpiompy, ny fanafihana an-tanan-dehibe sy ambanivohitra.
Hiresaka ny basy marovava ho an'izay te hanandrana hifandona amin'ny Tafika. Tsy ekena ny mpiray Dina manafika Tanàna na Lakazery, na fonja.
Tsy misy mahazo manao Fitsaram-bahoaka. Ireo mpitsara na mpitandro ny filaminana tratra manao kolikoly kosa dia ho sazy enjana no miandry azy ireo.
Arovana tanteraka ireo mpampiasa ny lalam-pirenena. Tsy ekena ary enjehina ireo PR na Police de la Route manao kolikoly.
Omena fiofanana manokana ireo Foloalindahy, indrindra ireo hisedra ireo mpanondrana antsokosoko ny harem-pirenena.
2- Service National
Ireo tsy manana asa rehetra, na kely fivelomana dia ampidirina Service National avokoa, 4 millions eo no isan'izy ireo. Hampihena ny tsy fandriam-pahalemana izany satria dia hiasa avokoa ny olona, tsy hisy ny mitaingi-tamboho hisotro toaka na hifoka rongony sy hiloka fotsiny.
Mamaky lalana, mamaky vato atao pavé, fanamboarana autoroute, manao barazy sy lakan-drano;
Miasa ozinina fanaovana ciment, goudron, atao béton sy goudron ary pavé ny lalana;
Fambolena velaran-tany lehibe, fambolem-bary, fary, mangahazo,
Fiompiana, fiompiana omby, trondro, tantely, soavaly, akoho, vorona, bitro, osy, ondry, jono an-tanety, andranomasina,
Fampianarana, fahasalamana, Fampianarana mamaky teny sy manoratra,
Fikarakarana ireo be antitra, ny ankizy;
Fanamboarana sekoly, hopitaly, trano fonenana, nouvelle ville;
Fanamboarana port, aéroport, barazy lehibe fanam-boarana jiro;
Fambolen-kazo, fiarovana ny ala, fanaovana éthanol;
Fanadiovana, zaridaina, fambolena vonikazo, fanaovana WC, fanaovana biogaz isam-pokontany;
Famonjena vonjy taitra, pompier;
Fampidirana rano madio, fanaovana pipeline;
Fitrandahana harena an-kibon'ny tany;
Miasa amin'ireo Indostria miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana
Ny Foloanlindahy, injeniera, Universitaires, no hanao ny encadrement, hisy fanofanana ara-miaramila sy arak'asa ireo SN.
Hanao fitafy manokana izy ireo, ary hanana badge.
Ny mpiasa rehetra, ireo mpandraharaha, na mpivarotra na mpamboly, na mpiompy, na mpanao asa-tanana, na mpanankanto, na mpanjono, na mpitatitra, na mpitrandraka madinika dia tsy maintsy miditra amin'ny ara-dalàna avokoa, misoratra OSTIE na OSIE na izay mifandraika amin'izany, misoratra CNAPS na manana assurance.
Amoraina ny fidirana amin'izany isam-pokontany misy azy.
Ahazo karatra sy badge natokana ho an'ny mpiasa, ahazo karatra elektronika mavo ny mpiasa, karatra maitso ny an'ny mpampiasa sy mpandraharaha sy ireo miasa tena.
Ho savaina daholo ireo tsy manana karatra sy badge ary tsy maintsy miditra SN.
Ireo milatsaka an-tsitrapo no mahazo mifidy mialoha ny toerana sy ny asa tiany atao ka mifandraika amin'ny fahaizany.
Ireo nahiditra noterena kosa dia tsy manan-tsafidy fa izay andefasana azy.
Ny Zaza sy ny tanora rehetra latsaky ny 16 taona dia tsy maintsy mianatra, na fiofanana ara-kasa.
Ho saziana mafy ireo Ray aman-dreny tsy mandefa ny zanany mianatra, esorina aminy ny vary, rano, éthanol anaty carte électronique raha minia tsy mandefa zaza mianatra.
Omena vatsim-pianarana tsara ny mpianatra eny amin'ny Oniversité, na fanjakana, na privé miisa 50 000 ary ireo mpianatra BEPC-Bac Pro, na ireo mianatra asa miisa 500 000.
Hisy Oniversité 3 lehibe ajoro eo anivon'ny Faritra 3
4- Carte électronique
Soloina Carte électronique, Carte bleue, Banking money, Mvola, Orange money, Airtel Money na application toy ny wechat, ny vola rehetra.
Sady hifehezana ny kolikoly no ahazoana fandriam-pahalemana, satria tsy hisy intsony ny vola anaty sakosy na any ambany fandriana, ny famarotana omby dia hiasa avokoa ny carte na ny téléphone.
Hisy fanentanana sy fampianarana amin'izany.
Mahazo Karatra elektronika mavo misy vary 150kg, rano 15m3, éthanol 30 litres isam-bolana ny isam-pianakaviana.
Misoratra OSTIE na OSIE na izay mifandraika amin'izay, hiantohana ny fahasalamana.
Hakana 1% ny karama ary ny mpampiasa no mandoa ny 3% ho an'ny fahasalamana ary 2% ho an'ny fiofanana sy fampianarana andoavana ny bourse n'ny mpianatra.
Hisy 1 500 000 ariary isan-tokatrano ihany koa io Carte io hividianana paneau solaire isan-tokantrano, ka averina 15 000 ariary isam-bolana ao anatin'ny 10 taona.
5- Centre complexe sportif
75% n'ny Malagasy dia latsaky ny 50 taona, ary 50% na ny atsasaky ny mponina dia latsaky ny 18 taona avokoa.
Ho jerena manokana izany ireo tanora ireo, ka hisy centre sportif isam-pokontany sy eny anivon'ny Kaominina, ary centre complexe sportif lehibe isaky ny Faritra 3.
Ny Centre complexe sportif, dia hisy terrain foot-rugby lehibe manaraka ny fenitra olympique, hisy gymnase couvert ahafahana manao ny sport rehetra en salle, Basket, Hand-ball, foot à 7, boxe, karaté, judo, Aïkido, kick-Boxing, kung-fu, ping-pong, escrime, danse...
Hisy ihany koa dobo filomanosana olympique, piscine, terrain tennis, athlétisme rehetra, ny perche sy saut à longueur, saut à hauteur, poids, boulodrome, hippodrome ho an'ny fitangainan-tsoavaly.
6- Sport du quartier
Hisy fanampiana manokana avy amin'ny Foibe ny hanamboarana complexe isam-pokontany, izay hisy mini terrain foot, basket, volley, athletisme.
Hisy stade couvert kosa eo anivon'ny Kaominina 3-5 mitambatra.
Hisy Stade couvert 2 lehibe isaky ny Faritra 3, izay apetraka amin'ny renivohitry ny Faritany amin'izao. Hisy ihany koa ny piscine Olympique.
Atsaraina avokoa ireo stade efa misy amin'izao.
Hisy ihany koa famatsiam-bola omena ny sekoly na privé na public anamboarana ny terrain hilalaovan'ny tanora sy hanaovany sport.
7- Ady amin'ny zava-mahadomelina, ny toaka, ny sigara, ny paraky
Fositra manimba ny tanora ireo zava-mahadomelina ireo, ka dia programa goavana no hiatrehana izany ady izany manomboka any amin'ny fambolena sy fanamboarana azy, ny kolikoly ao anatiny ary ny famarotana sy fanondranana izany any ivelany.
Akarina 30% ny hetra alaina amin'ireo sigara sy paraky ary toaka.
Arahi-maso ny fanamboarana toaka gasy mba ho lasa éthanol tsy azo sotroina.
Ho raràna ny fanaovana publicité amin'ny sigara, paraky ary ny toaka. Ho fehezina ireny karazana hetsika mifandray amin'ny varotra sigara sy toaka ireny.
Asiana toerana manokana hitsaboana ny tanora difotra ao anatin'ny sigara, toaka, rongony.
Ampiana ireo te hiala amin'izany.
Akatona avokoa ireny bar, epi-bar, karaoke tsy ara-dalàna ireny, na akaiky sekoly na akaiky Fiangonana na hopitaly sy toeram-pitsaboana.
Ho jerena manokana ireny boite de nuit sy toerana na hotely lasa toerana fivarotan-tena ireny.
8- Fonja sy trano fitsaboana ireo adala
- Havaozina tanteraka ireo fonja rehetra manerana ny Nosy, Hisy fonja 3 lehibe vaovao, iray isaky ny Faritra, amboarina hiazoanana ireo gadra tena mamoafady.
Ampiasaiana avokoa ireo gadra, misy ny tsy mahazo mivoaka, fa ananganana indostria ao amponja.
Tsy atao vesatra ho an'ny fiaraha-monina ny gadra fa tsy maintsy miasa mamelon-tena.
- Hisy ihany koa toerana hametrahana sy hitsaboana ireo adala.
9- Ny ady amin'ny halatr'omby
a- Mila miompy omby ho hanina:
Ny Malagasy dia tia miompy omby ataony banky, izy rahateo tsy dia mila vola kirakiraina toy ny ety an-drenivohitra, satria sady miompy izy no mamboly, ka filana kely fotsiny ara-bola no amarotany omby, fianaran-janany, tsy fahasalamana, sira, paraky, menaka, siramamy, labozia sy izay fitaovam-piasana ilaina, ary rehefa andoa vola karaman'ny mpiasa izy.
Vokatr'izay dia vitsy ireo omby amidy noho ny filan'ny mpanjifa, ka dia mahazo vahana ny halatr'omby sy ny tsy fandriam-pahalemana.
Ny tetik'asa "Vitatsika io" izany dia ametraka lamina mba hisian'ny fiompiana omby ho anina, sy omby hakana ronono.
Tsy maintsy mampiditra karazan'omby vaovao izany isika. Na omby fakana hena, na omby fakana ronono.
Omena tosika ara-bola sy ara-pitaovana ireo mpiompy, na ireo tanora nivoaka ny Agro, na lycée agricole ireny.
Omena tany malalaka ahafahana miompy, toy ireny Runch ireny. Ampiarahina atao akaikin'ilay tany fambolena vary sy katsaka lehibe ireny, satria ny tanjona dia tsy hifaninana ny famokarana sakafon'olombelona sy ny sakafom-biby.
Hisy ny nouvelle ville hipetrahan'ireo mpiompy sy mpamboly hiroso amin'ireo fambolena sy fiompiana goavana ireny. Hisy ny Poste avancé n'ny mpitandro filaminana, hisy sekoly, hopitaly, tsena, biraom-panjakana, paositra...
b- Atsangana ireo sekoly ambony momba ny fiompiana:
Ao anatin'ilay Oniversité 3 lehibe hatsangana, Faritra Avaratra, Afovoany, Atsimo, dia hisy fianarana manokana momba ny fiompiana, indrindra ny omby.
Aparitaka amin'ny Kaominina mpiompy omby, ny Lycée agricole.
Ahazo vatsim-pianarana ireo mpianatra amin'ireny Oniversité sy Lycée professionel ireny na privé na public.
Hanofana veterinera na mpitsabo biby maro ny sekoly.
d- Asiana puce avokoa ny omby rehetra ary ampiasaina ny Carte électronique:
Ny Carte électronique dia hisolo ny vola, tsy misy intsony izany ny vola amin'ny sakôsy entina mividy omby. Ny kolikoly ataon'ny Polisy, Zandary, Miaramila, Mpitsara, Prefe, Maire, sy ny mpitondra ambony dia ho voafehy, satria ho hita iza no nanome vola an'iza.
Ny omby tsirairay, dia ampidirina anaty système informatisé, izay eny anivon'ny veterinera isaky ny Kaominina 1 600 no hisahana izany. Tsy mihoatra ny 10 000 Ariary ny vola aloan'ny Mpiompy isaky ny omby amin'ny fampidirana ny puce électronique amin'ny omby iray, izay ahitana ny anaran'omby, ny lokony, ny sariny, ny tompony, ny nividianana azy, sy ny tantaran'iny omby iny.
Hisy Borne apetraka isaky ny Kaominina, ka azon'ny rehetra hanaovana ny asa fifampivarotana ny omby. Afaka ampiasana ny Carte électronique ihany koa. Fijerena ny crédit vary 150kg isam-bolana, crédit éthanol 30 litres, ny crédit rano 15m3, na ny vola ao anatiny.
Azo atao koa ny mampiasa ny téléphone hifamarotana ny omby, na téléphone faran'izay tsotra indrindra aza, na ny internet, izay tsy andoavam-bola ny connexion amin'io service io, toy ny FB na wikipédia gratuit ireny, ka dia toy ireny crédit téléphone ireny ihany ny fampiasa azy, omena an'iza ny omby, Numero firy, ampidirina ny numero karatra maitso na karatra mavon'ilay mpividy. (Maitso an'ny professionnel na mpandraharaha, mavo ny an'ny mpajifa).
e- Fanaraha-maso ny omby: Omena fitaovana scanner à puce ny mpitandro ny filaminana
Ankoatran'ny scanner à puce, dia vatsiana téléphone ny mpitandro ny filaminana ka afaka mijery ny base donnée n'ny omby.
Vao mampiasa ny scanner ilay mpitandro ny filaminana dia ho fantatra iza ilay mpitandro ny filaminana nanara-masoa ny ombin'iza. Ho tratra eo avy hatrany izany izay mety ho fanararaotam-pahefan'ny mpitandro ny filaminana.
Ny omby dia hisy "Sata" na statut, omby ompiana, dia hita amin'ny statut ny izany fa omby ompiana ireny, ka raha tratra mivezivezy izany dia efa azo eritreretina ho omby halatra.
Raha omby "Famindrana", "en déplacement" indray ny omby, dia atao transfert provisoire amin'ilay olona miandraikitra ny déplacement na transport indray ilay omby, ka dia hita eo ny lisitry ny omby sy ny tompon'omby manana sata "Famindrana", "en déplacement" ho entin'io mpandroaka omby na mpitatitra omby io.
Misy kosa ny sata " Famindrana tompo" na transfert de propriété, izany hoe omby nomena na namidy, dia hita ny tompony teo aloha sy ny tompony vaovao.
Ny veterinera vita fihanihanana izany no anangona ny puce amin'ny omby efa maty, ka hanana sata na statut "omby maty" ilay omby.
f- Toerana famarotana, famonoana omby, Abattoir sy ny fanondranana omby any ivelany, export:
Avaozina ireo toerana famarotana omby, mba tsy hiteraka aretina mifindra amin'ny omby, toerana madio.
Hisy Borne azon'ny mpivarotra sy mpividy ampiasaina. Azon'izy ireo hijerena ny fahasalamana, ny fanafody sy vakisiny natao tamin'ny omby.
Avaozina tanteraka ny Toerana famonoana omby isaky ny Kaominina, asiana fanaraha-maso manokana toy ny caméra de surveillance, asiana ny informatique izay ny Veterinera no iandraikitra izany. Hisy ny efitra fampangatsiahana lehibe na chambre frigo lehibe, izay andoavam-bola ny fampiasana azy, ka ampidi-bola ho an'ny Abattoir.
Enjehina ary faizina mafy ny Veterinera be kolikoly, toy ny fanaterana hena ho azy ka hikipy ny masony amin'ny omby na biby tsy salama asaina vonoiny.
Ireo omby ompiana amin'ny toerana mikatona ihany na Runch no azo vonoina ka ahondrana any ivelany, izay anampiana ny Kaoperativa na Orin'asa Malagasy ny fanokafana ny tsena na any Chine, na Arabie Saoudite, na Océan Indien.
Tsy maintsy miara-miasa amin'ny Mpiompy Malagasy ny vahiny izay te hiantsehatra amin'ny omby.
10- Teti-bola sy famatsiam-bola
Araky ny hitatsika io dia mahasahana ny sehatra rehetra ny resaka Fandriam-pahalemana, ka efa tafiditra any amin'ny famatsiam-bolan'ireo sehatra maro voatanisa ireo avokoa ny vola ilaina amin'ny Fandriam-pahalemana.
Raha tanisaina fotsiny dia
a- Ny tetikasa momba ny tanora
Programa goavana, eo amin'ny 21 milliards de dollar eo no heverina ho laniana amin'izany, ka samy ahazo 7 milliards de dollar isaky ny Faritra 3 (Avaratra, Afovoany, Atsimo):
- Ny 3 milliards $ anamboarana ny Centre complexe sportif;
- Ny 2 milliards $ hanamboarana ny nouvelle ville;
- Ny 1 milliard $ omena ireo sekoly sy Fokontany anamboarana ny terrain de sport an-tsekoly, samy mahazo 150 000 000 Ariary isam-pokontany, hamatsiana izay sekoly ao na ny centre sportif Fokontany;
- Ny 1 milliard $, amatsiana fitaovana sy ampandehanana ny sport.
Ny vola rehetra miditra amin'ny hetra, sigara, toaka, publicité tafiditra amin'ny resaka sport dia hiditra manontolo ampandehanana ny Sport.
Ho jerena manokana ny fitantana ireny vola ireny eo anivon'ny Tafita na ny Fédération.
Ny hetra rehetra miditra amin'ny téléphonie mobile, internet, izay ny tanora no tena manjifa azy, dia hiditra amin'izany kitapom-bola fanatanjahan-tena izany avokoa.
Ny budget d'nvestissement kosa no hisahana ny foto-drafitrasa vavety rehetra, izay ho azo avy amin'ny harena ankibon'ny tany sy ny harena an-dranomasina.
b- Ny an'ny Foloalindahy
Avaozina tanteraka ireo lakazery, ireo fitaovana ampiasaina sy fitaovam-piadiana eo amin'ny Foloalindahy, Miaramila, Zandary, Polisy.
Ny Mpiandry fonja, Mpiandry ala, Mpamonjy vonjy aina na pompier, ny Injeniera, ny Agro, ny Dokotera, Mpitsara, Mpampianatra, Douanier, Mpitatitra, dia omena statut particulier, hanana fifehezana manokana, hanana trano manokana hipetrahana, hanana tombotsoa manokana mifanandrify amin'ny asany.
20 milliards de dollars ny teti-bola hanaovazana tanteraka ireo caserne, fividianana fitaovam-piadiana mahery vaika sy moderina. Fampihofanana ny Tafika. Hividianana sambo aingam-pandeha, fiaramanidina 6 aingam-pandeha (2 isaky Faritra, Avaratra, Afovoany, Atsimo), hélicoptères, fitaovana hifehy ny fandriampahalemana ao amin'ny Canal des Pangalanes. Fitaovana hifehezana ny fandriampahalemana sy fiarovana ny sisintany na anabakaba na andranomasina.
Ny vola azo avy amin'ny volamena, Bois de rose, bois d'ébène, palissandre, vanille, Jirofo, Kafé, Cacao, Girofle, Ylang Ylang no hamatsiana ara-bola ireo fampitaovana moderina ireo.
Ho tohanana manokana izany ireo mpamboly ireo mba ahabetsaka ny vokatra.
Tsinjovina manokana kosa ny ala, misy ny hazo izay avadika ho taozavatra vao amidy, misy kosa no ho kajiana sy harovana. Ny biby sarobidy rehetra dia tsy misy amidy, toy ny sokatra.
Tombanana eo amin'ny 30 milliards de dollar eo ny vola hiditra amin'ity sehatra ity, ka amin'io no hakana ny vola momba ny Fiarovana sy ny Foloalindahy.